Ọgwụ mgbochi ime: Uru na ọghọm | Bezzia
Susana godoy | | Mmekọrịta, Ahụike, Mmekọahụ
Know maara nke ahụ uru na ọghọm nke ọgwụ mgbochi ime? Ọ bụ otu n'ime usoro mgbochi afọ ime eji eme ihe, ọkachasị n'etiti ụmụ agbọghọ. Ọ dị oke irè na igbochi afọ ime, ọ nwere mmetụta ole na ole. Na mgbakwunye, ọ dị oke nchekwa.
Agbanyeghị, a na-akwado ya maka ojiji mgbe mgbasa ozi ndị ọzọ niile dara. Ma, olee uru na ọghọm dị na ya? N’isiokwu a pụrụ iche anyị ga-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụtụtụ mgbe mkpụrụ ọgwụ gafere.
1 Kedu ihe bụ ụtụtụ mgbe Erere
2 Mgbe iwere ya
3 Enwere ike iji ya dị ka ọgwụ mgbochi mgbochi mgbe niile?
4 Ikwu okwu banyere irè nke ụtụtụ mgbe Erere
5 Ọgwụ ndị ahụ ọ na - eme ka mmetụta ọgwụ ụtụtụ ghara ịgwụ?
6 Ihe ize ndụ nke ụtụtụ mgbe pill
6.1 Ectopic ime
6.2 Ọrịa thromboembolic
7 Ihe ngbanwe
8 Ere ọgwụ mgbochi ịmụ nwa: uru na ọghọm ya
9 Atụmatụ ikpeazụ
10 Ego ole ka ụtụtụ na-eri mkpụrụ ọgwụ?
11 Kedu ka ị ga - esi were ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara?
12 Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-emechi ụtụtụ
13 Kedu ihe mgbochi ọgwụ mgbochi mberede?
14 Ajuju ajuju ajuju
14.1 Enwere m ike inwe mmekọahụ na-enweghị nchebe mgbe m gachara ụbọchị?
14.2 Ọ ga - ekwe omume ịme ụtụtụ ụtụtụ mgbe mkpụrụ ọgwụ gachara?
14.3 Enwere m ike ịtụtụ ụtụtụ na mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụrụ na m na-acepụ ọgwụ mgbochi kwa ụbọchị?
14.4 Enwere ike iburu ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara ugboro abụọ n'ọnwa?
15 Kedu ka mkpụrụ ọgwụ kwa ụbọchị si arụ ọrụ
Kedu ihe bụ ụtụtụ mgbe Erere
Pill ma ọ bụ pill n'ụtụtụ bụ usoro mgbochi nke lowers ihe ize ndụ nke afọ ime site na igbu oge ma ọ bụ ịmalite ịmụ nwa. O nwekwara ike igbanwe ngagharị nke spam, gbochie ha iru ebe ha na-aga. Ya mere, ohere nke na akwa ga-emecha fatịlaịza na-ebelata nke ukwuu.
Ihe na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ ọgwụ ụtụtụ bụ levonorgestrel, steroid nke na-emepụta sịntetik nke nwere mmetụta dịka progesterone. Agbanyeghị, enwere ndị ọzọ jikọtara ọnụ, nke nwere progesterone yana estrogens.
A na-echekarị na ọ bụ ọgwụ ite ime, ọ bụ ezie n ’eziokwu na enweghị ike ịtụle ya otu a, ebe ọ bụ na-arụ ọrụ tupu akwa ahụ amalite n’akpa nwa. N'ezie, ọ bụrụ na ịkụnyelarịrịrị, nwanyị ahụ ga-atụrụ ime ọbụlagodi na ọ ga-ewere mkpụrụ ọgwụ ahụ n'ụtụtụ. Usoro mgbochi ime a nwere ike iwepụta mgbanwe na endometrium, na-egbochi ịkụbanye akwa nke akwa, n'ihi nke a, enwere ndị na-eche na ọ nwere ike bụrụ ọgwụ ite ime. Ma maka oge ahụ enweghị ọmụmụ sayensị iji gosipụta ya.
Mgbe iwere ya
Na-arụ ọrụ n'ezie, ị ga-ewere ụtụtụ-mgbe pill n'ime awa 72 nke inwe mmekọrịta zuru oke, ịbụ onye kachasị ndụmọdụ iji were ya ozugbo ị mechara. Ma, echegbula onwe gị, ọ bụrụ na ị were ya n'ime ụbọchị atọ na-esote, mkpụrụ ọgwụ ahụ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ee, ị kwesịrị ịma na ka oge na-aga ọ ga-ebelata.
Dọkịta gị ga-agwa gị ego ole ị ga-ewere, mana ọ ga-abụkarị otu mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụrụ na ọ nwere 1mg nke levonorgestrel. Ọ bụrụ na egosiputara ọgwụ ahụ na mbadamba 5mg abụọ, were otu ụtụtụ ma mgbe awa iri na abụọ gachara.
Enwere ike iji ya dị ka ọgwụ mgbochi mgbochi mgbe niile?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ nweghị ihe egwu ahụike dị ka ọ ga - adị ka anyị ga - ahụ ma emechaa, nke bụ eziokwu bụ na ọ na - egbochi afọ ime iji naanị ihe mberede. Nke a pụtara na enwere ike iwere ya naanị mgbe condom mebiri, ma ọ bụ mgbe emebeghị ihe ndị dị mkpa iji gbochie afọ ime.
Ọ dị mkpa ka ị mara na ịdị irè nke ọgwụ a bụ 95%, ebe nke condom bụ 98%. Yabụ, anyị na-ekwusi ike, na-enweta ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara naanị mgbe ị na-enweghị nhọrọ, na ọkacha mma n'okpuru ndụmọdụ ahụike.
Ikwu okwu banyere irè nke ụtụtụ mgbe Erere
Ugbu a na anyị ahụla ihe ọgwụ ụtụtụ bụ, na ụdị ọgwụ a ga-ewere, ka anyị lekwasị anya na gị arụ ọrụ. Anyi ekwuola na odighi oru dika uzo ozo eji egbochi ogwu, ma ... odi ihe ozo ichoro ima? Eeh.
Dị ka anyị kwuru, ọ na-ebelata ka ụbọchị na-aga. Iji nye anyị echiche, Na 24 awa mgbe enwechara mmekọahụ ọ ga - abụ 95% dị irè, 48% mgbe elekere 85 na 72% gachara awa 58. N'iburu nke a n'uche, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ụbọchị mbụ, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị na ohere nke ịtụrụ ime dị elu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị amalitela ịmụ nwa.
Site n'ụzọ, ị ga-ewere ya mgbe ị na-enwe mmekọahụ ma ọ bụghị tupu, dịka ọ na-agaghị enyere anyị aka. Ọ bụrụ n ’ime nke a na-eme ka obi jọọ gị njọ ma ị bupụta ya, I kwesiri inwe ozo, ewezuga ma ọ bụrụ na opekempe 3h agafeela.
Tụkwasị na nke a, a ghaghị iji condom mee ihe na ihe ize ndụ nke àkwá na-agwụcha fatịlaịza dị obere, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nil. Ọ bụrụ n ’ị theụ ọgwụ mgbochi ime, ị ga-amalite mkpọ ọhụrụ ụbọchị mgbe ị takingụsịrị ọgwụ mgbochi ahụ; ma oburu na ihe ichoro ibido nara ya, ichoro maka ubochi mbu nke ihe mmeko ahu. Ga-agbaso ntuziaka ndị a ma ọ bụrụ na ị na-eji ma ọ bụ na ị ga-eji mgbaaka mmamiri ma ọ bụ mgbochi mgbochi mgbochi. Ma, n'ọnọdụ niile, eji ihe condom eme ihe nke oma.
Ọ bụrụ na oge gị bụ ụbọchị 3-4 ụbọchị, ma ọ bụ gosipụta ọdịdị na ọ naghị enwekarị, ọ ka mma ile ule ime nwa. N'ihi ya, ị hapụrụ obi abụọ.
Ọgwụ ndị ahụ ọ na - eme ka mmetụta ọgwụ ụtụtụ ghara ịgwụ?
Enwere ụfọdụ ndị nwere ike belata ịdị irè ya, ha bụ ndị a:
Ikwesiri iburu n'uche na Ahịhịa nke San Juan, nke a na-akpọkwa aha nke St. John wort, nwere ike belata ịdị irè.
Ihe ize ndụ nke ụtụtụ mgbe pill
Ọ bụ ezie na ọgwụ a anaghị enwekarị nsogbu. N’ezie, na Spen ka a malitere ire ya n’afọ 2001, ruokwa mgbe 2013 ka a na-akọ ya Ọnọdụ 20 ajọ mmeghachi omume ọjọọ, dịka afọ ime ectopic na ihe egwu nke ibute ọrịa thromboembolic.
Ime afọ ime, nke a makwaara dị ka afọ ime ectopic, na-apụta mgbe akwa a kụrụ n’akụkụ n’akụkụ akpanwa, ọtụtụ oge (ruo 98%) na tubes fallopian. Vidị ụdị afọ ime a pere ezigbo mpe, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe a na-ahụkebe bụ ime dị ime n’ime ọnwa atọ mbụ. Ma, ọ bụrụ na ị jikwaa ịga n'ihu ma anaghị achọpụta ya n'oge, nwere ike ibute nnukwu nsogbu ụmụ nwanyị.
Ihe mgbaàmà afọ ime afọ ime:
Mgbu na ubu na azụ
Nausea na dizziness
Ike na-agwụ ike
Ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla n'ime ndị a mgbaàmà, egbula oge ịga dọkịta gị ozugbo enwere ike.
Mepụta mkpụkọ nke eriri n’ime akwara nwere ike iru ngụgụ na-ebute ọrịa thromboembolic. Womenmụ nwanyị ndị na-eji ọgwụ mgbochi hormonal nwere ike ịnwe ihe ize ndụ 3 nke ịmalite ọrịa a; N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-a pụ ọgwụ ụtụtụ nke ihe na-arụ ọrụ bụ levenorgestrel, ihe egwu nke ịta ahụhụ na ya dị obere, nke mere na naanị ụmụ nwanyị 20 n'ime 100 ga-ata ahụhụ ya.
Mgbe anyị na-ekwu maka ọgwụ ọjọọ, anyị kwesiri ikwu maka contraindications. Thetụtụ mgbe pill nwere ha, na ekwesiri iburu ha n’uche iji zere nsogbu na-ebilite. Ha bụ ndị a:
Beingbụ lactose ma ọ bụ galactose anabataghị
Inwe ọrịa Crohn, colitis ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emetụta eriri afọ
Akụkọ banyere afọ ime na / ma ọ bụ mbufụt nke tubes
Dịka nchịkọta, anyị na-agwa gị uru na ọghọm nke ọgwụ mgbochi a na-ewu ewu:
Enwere ike iji ya mgbe mmekọrịta nwoke na nwanyị gasịrị.
Enwere ike ịga n'ihu na-eji mkpụrụ ọgwụ mgbochi ime oge niile.
Ọ naghị emetụta ọmụmụ ogologo oge.
Ọ naghị echedo onwe ya pụọ ​​n'ọrịa butere mmekọahụ.
Ekwesiri iji ya n'ime awa 72 mgbe enwechara mmekọahụ, arụmọrụ ya na-ebelata oge.
Youkwesighi ichegbu onwe gị ma ọ bụrụ na ị theụ ọgwụ, oge ịhụ nsọ gị dị ka oge ma ọ bụ n'oge. A mismatches bụ kpam kpam nkịtị, na ndị njem, yabụ n’ọnwa na-eso ya, ihe niile ga-alaghachi na nkịtị.
Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị tụrụ ime, ọ bụkwa afọ ime achọrọ, mkpụrụ ọgwụ agaghị emetụta ẹmbrayo. Na mgbakwunye, ọ gaghị belata mmiri ara ehi gị, yabụ ị nwere ike ịlaghachi ị drinkingụ ya mgbe ị tụlere ya. Ee, ndị ogwu na-egbochi ogwu anaghị echebe gị pụọ n'ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ, ya mere a na-atụ aro iji condom mgbe niile.
Ego ole ka ụtụtụ na-eri mkpụrụ ọgwụ?
Nke a pill nwere ọnụahịa gburugburu 20 euro. Nwere ike ịzụta ya n'ụlọ ahịa ọgwụ, ọ bụ ezie na ọ bara uru ịga ụlọ ọgwụ, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ebe a ebe ha nwere ike ịkọwa ya na ekele maka nke a, ego a ga-ebelata nke ukwuu. Ọ dịghị ihe na-afụ ụfụ ịjụ dọkịta gị maka ndụmọdụ.
Kedu ka ị ga - esi were ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara?
Dị ka aha ya na-egosi, a ga-ewere ụtụtụ mgbe pill gasịrị mgbe enwere mmekọahụ na-enweghị nchebe ma ọ bụ mgbe nchebe dị otú ahụ arụghị ọrụ. Ngwa ngwa ewere ya, nke ka mma. Mana ka osila dị, ekwesighi iju gị ọnụ. Ebe ọ bụ na anyị nwere ihe dị ka awa 72 mgbe mmekọrịta ahụ gasịrị. Ọ bụrụ na anyị adabere na ọnụ ọgụgụ, ha doro anya. Ọ bụrụ na anyị ewere ya n'ime awa 24 mgbe anyị nwesịrị mmekọahụ, ọ ga-adị irè karịa 95%. Na awa 48, ọ na-adaba na 85%. Ihe dị oke mkpa iburu n'uche, ọkachasị mgbe anyị nọ n'ime ụbọchị tupu ọpụpụ.
Ogwu a nwere ike ibia n'ime ogwu pill abuo. Ga-ewe ha elekere 12 iche. Ọ bụrụ naanị gị ha na-ere otu ọgwụ, mgbe ahụ ọ ga-adị mfe karị ebe ọ bụ na ị ga-ewere naanị otu pill. Cheta na obu otu onwa ma na odi nma mgbe nile iwere ya ngwa ngwa o kwere mee iji gbochie ya.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-emechi ụtụtụ
Mgbe enwere obi abụọ, ọ kacha mma ịtụgharị gaa na Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-emechi ụtụtụ. Naanị otu a, ị ga - enwe ike ịchọpụta ihe ọ bụla ịchọrọ iji nwayọ nwayọ, ma ọ bụrụ na ị takenụla ọgwụ ahụ maọbụ ọ bụrụ na ị na - achọ ime ya.
Kedu ihe mgbochi ọgwụ mgbochi mberede?
E nwere ndị na-akpọ ya ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ọgwụ mberede. Ma dị ka aha ya na-egosi, ọ na-eji na ihe mberede. Ọ bụrụhaala na enwere nsogbu nke ịtụrụ ime mgbe enwere mmekọahụ. Ya mere, ọ zuru oke maka igbochi afọ ime na-achọghị. Ekwesighi imeghari ya na ogwu dika ogwu. Ebe ọ bụ na a na-eji nke a eme ihe mgbe nile na ọgwụ mgbochi mberede, ọ bụ naanị n'ọnọdụ ndị akọwapụtara. Ekele maka ihe ndị dị ka Levonorgestrel, ọ na-egbochi ịmụ nwa, ma na-enweghị mmetụta dị ukwuu n'ahụ nwanyị.
Enwere m ike inwe mmekọahụ na-enweghị nchebe mgbe m gachara ụbọchị?
Ihe kachasị mma abụghị. Ọzọkwa anyị na-ekwu ọzọ na a ghaghị iburu n'uche oge ahụ ka ọgwụ mgbochi post nwere arụmọrụ dị mkpa. Ọ bụ ya mere na ọ bụrụ na anyị nwere mmekọrịta na-enweghị nchebe, ka oge na-aga anyị ga-ewere ọgwụ ahụ. Ọ bụrụ na mgbe nke ahụ gachara na awa ole na ole gachara ma ọ bụ ụbọchị ole na ole, anyị alọghachi nwee mmekọrịta na-enweghị nchekwa, anyị agaghị enwe nchebe pụọ na afọ ime na-eme. O bu ya kpatara inwere ike inwe mmeko mana jiri condom ka nsogbu ghara idi.
Ọ ga - ekwe omume ịme ụtụtụ ụtụtụ mgbe mkpụrụ ọgwụ gachara?
Dịka nkwanye, ọ kachasị mma ịga ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ gị kacha nso. Ọ bụ maka na ha nwere ike ịdụ gị ọdụ mgbe niile, ọ ga - agwa gị otu ị ga - esi were ya. Na isiokwu nke ọgwụ na karịa homonụ na nke a, ọ ka mma mgbe niile igwu egwu ya. Ikwesiri iche na otu mkpụrụ ọgwụ na-eme ka ụtụtụ dị ka anọ nke ọgwụ mgbochi. Enweela ikpe dị oke njọ nke na-enweghị ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara, a na-ewere ndị ahụ mgbe niile. N'ezie, ị ghaghị ijide n'aka na ha nwere ihe ndị kwesịrị ekwesị na gram. Ihe anyị na-agaghị mgbe niile mara n'aka. Yabụ, anyị ga-aga n'ihu ịhọrọ ọgwụ mgbochi mberede wee nọrọ jụụ karịa.
Enwere m ike ịtụtụ ụtụtụ na mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụrụ na m na-acepụ ọgwụ mgbochi kwa ụbọchị?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-a contraụ ọgwụ mgbochi ọnụ, ọ bụrụ na ị ghara ị aụ ọgwụ, mgbe ahụ ị nwere ike ị theụ ụtụtụ mgbe ọgwụ ahụ gachara. Ọ bụrụ na ị theụ ọgwụ ahụ kwa ụbọchị, na-echefughi ihe ọ bụla ị ga-eme, mgbe ahụ ị gaghị achọ ọgwụ ahụ post-ụbọchị. Mana ịlaghachi n'elu, ọ bụrụ na ịchefuola gbaa gị, mgbe ahụ ọ ga - aka mma ka ị họrọ ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara. Ruo mgbe ị na-abịarute oge ịhụ nsọ gị, ọ kachasị mma iji condom na mmekọrịta gị ma soro onye ọkachamara n'ọrịa gị. Ọtụtụ oge, ọ dị mma ichere maka usoro ọhụụ ịmalite ịmalite ịmịnye ọgwụ ọzọ. Naanị ya ga-akwado ya. A) Ee, mgbe oge ruru, anyị ga-echefu banyere afọ ime nwere ike ime anyị ga-ebido dị ka ọ dị na mbụ.
Enwere ike iburu ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara ugboro abụọ n'ọnwa?
Ee, ọ ga-ekwe omume mana ọ kwadoghị ya. Nke mbụ maka akwa homonụ nke anyị ga-ata ahụhụ ahụ anyị na nke abụọ, n'ihi na ọ nwere ike tufuo arụmọrụ ya. Ahụ ga-eme ya ma ọ bụrụ na anyị ewere ha ugboro ugboro. Ahụ anyị maara ihe ma ọ ga-ewe obere oge iji kpochapụ pill n'ụtụtụ. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na enwere ike ịgbanwe ụfọdụ mgbanwe n'oge ịhụ nsọ. Ihe ekwesighi itu ujo ma kwesiri iburu n'uche.
Kedu ka mkpụrụ ọgwụ kwa ụbọchị si arụ ọrụ
Tụtụ n'ụtụtụ mgbe pill nwere, n'etiti ihe ndị mejupụtara ya, Levonorgestrel 0.75 mg. Ọ ga - abụ ụlọ ọrụ a na - arụ ọrụ dị ka mgbochi mgbochi. Nke ahụ bụ, ọ ga-adị gbochie ovulation ya mere, ọ na - egbochi ovum ịmịpụta akwa mgbe mmekọ nwoke na nwanyị na-enweghị nchekwa. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iji were ya ozugbo enwere ike.
Ozugbo anyị theụrụ ọgwụ ahụ, a na-akụghasị usoro anyị. Ebe ọ bụ na ọ dịghị àkwá nwanyị, enwere ike ịgbanwe nsọ nwanyị. Nke a bụ ihe kpatara igbu oge ji abụkarị, mana ọ bụghị n'ọnọdụ niile. Dị ka anyị maara nke ọma, ọ bụghị ahụ́ niile na-eme otu ihe. Ya mere, oge ahụ nwere ike ịbịakwute gị n'ụbọchị ziri ezi, ma ọ bụ tupu na mgbe emechara. Cheta na anyị na-ewere oke homonụ dị oke elu.
Ọ bụrụ na n'onwe ya, n'oge mgbatị nkịtị anyị na-enwe mgbanwe, mgbe anyị gbanwere ya, a ga-ahụkwu ya. Ọ bụrụ na oge ahụ apụtaghị izu abụọ mgbe oge ruru, mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwale ule ime nwa.
Anyị nwere olile anya na ntuziaka a bara uru maka ịmụtakwu banyere usoro igbochi afọ a ewu ewu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Ere ọgwụ mgbochi ịmụ nwa: uru na ọghọm ya
Ihe 147 kwuru, hapụ nke gị
pzz Ejiri m ogwu ahụ n’echi ya ma enwere m ike ịgwa gị na ọ dị oke ọfụma mana ka isiokwu ahụ kwuru naanị na ikpe “pụrụ iche” ebe nke a nwere ike ịgbanwe ahụ anyị ma mee ihe ọzọ
Ndewo Enwere m ajụjụ ma ọ bụrụ na anaghị m egbochi mkpụrụ ọgwụ mgbochi otu ụbọchị mana ọ bụrụ na m were ya mgbe elekere iri na abụọ ọ nwere mmetụta? ma n ’ubochi ahu echefuru m na m nwere enyi nwoke. Ma e wezụga nke ahụ, emechaghị m ịnakọta ngwugwu ahụ niile n'ihi na m na-arịa ọrịa, ọ bụ naanị ụbọchị 4 ka mụ na enyi m nwoke nọrọ kemgbe.
Carlos Nwachukwu (@ kachukwu.ikechukwu) dijo
O nwere mmekọahụ na oge o were ọgwụ ahụ
Zaghachi Carlos Junior (@ onyekachukwu000019)
Ndewo, achọrọ m ịjụ ajụjụ.M na-a theụ ọgwụ nke ụbọchị na-esote nke na-abịa na ọgwụ abụọ mana m na-a timesụ ugboro atọ n'otu oge ịhụ nsọ. Kedụ ihe ọ ga-abụ na ahụ m, biko zaa m ọsọ ọsọ, imeela nnọọ
Ndewo Paola, achọrọ m ịma ma ị nwetara azịza nye ajụjụ gị?
Know ma na otu ahụ na-eme m, achọrọ m ịma ihe ha zara gị? Daalụ.
A Iụrụ m ọgwụ ahụ n’echi ya 2 n’otu ọnwa ahụ, m na-agba ọbara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 8, jiri obere mmiri mmiri.
Ndewo, na 13 nke ọnwa a ka mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta na 2 ụtụtụ na naanị echi 16, m ga-ewere ọgwụ ahụ, ọ metụtara m otu ihe ahụ? biko zaa m ngwa ngwa
... Egwu na-atụ m.
Get tụrụ ime? n'ihi na ugbu a otu ihe ahụ na-eme m: v
Aụrụ m ọgwụ ahụ mgbe awa 36 gachara ma tụrụ ime
Na July 30, m gụchara oge m wee nwee mmekọrịta na August 5 enwere m mmekọrịta na preserbatibo na agbanyeghị n'echi ya, m theụrụ ọgwụ ahụ ma August 21 ruo 24 alaghachiri m ịhazi na Septemba niile ahapụbeghị m ma agabeghị m. laghachi inwe mmekorita nke o kwesiri ibu. Daalụ nke ukwuu
dị njọ? 🙁 M weere ya ruo awa iri atọ na atọ
A Iụrụ m ọgwụ na-esote ụbọchị na ọ dị mkpụmkpụ .. Enwere m isi ọwụwa, mgbu afọ m na-a itụ ya .. na mgbe elekere isii nke ụtụtụ nwoke ahụ bịara ọzọ, ọ bụ ihe nkịtị?
Ndewo Enwere m oge m na August 20 na Septemba 1 mụ na enyi m nwoke na-enweghị nchebe, m nọ na ụbọchị iri atọ, na ụbọchị 30 n'ụtụtụ m na-a pụ ọgwụ ahụ ma oge ahụ bịara na 2, ụbọchị ise tupu Ma ugbu a aghaghi iru ebe ahu ma na nke iri ka emesiri metu m ma echere m na oge nkem eruola, mana obu nani unyi, adighi agba obara m na ụjọ na-eche m ma m di ime. Daalụ.
Ndewo, enwere m mmekọahụ na Ọktọba 11 na elekere na-esote m na-a theụ ọgwụ nke ụbọchị na-esote.M na-a pụ ọgwụ nke abụọ mgbe awa 13 gasịrị. onwere ike ime ya? Ekwesịrị m ịbịa na Ọktọba 19 mana oge ahụ abịaghị, achọrọ m azịza daalụ
Zaghachi na pamela
Ndewo, enwere m ajụjụ ma ọ bụrụ na m were ọgwụ ahụ n’echi ya n’ime oge a kara aka (awa iri asaa na abụọ) nke na - eme ụbọchị ndị na - esote, ọ na - adịrị m mfe ịtụrụ ime ma ọ bụrụ na m nwee mmekọahụ n’echeghị eche.
Ndewo, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, emechaala m nwee ike ịhazi na anyị nwere mmekọrịta, ana m aillụ ọgwụ mberede mana mgbe ụbọchị abụọ gachara m ọzọ, adị m otu a ruo ụbọchị iri abụọ, ụjọ na-atụkwa m, biko zaa mu
Ndewo, ajụjụ, gịnị na - eme ma ọ bụrụ na m a theụ ọgwụ ahụ, mana enwetaghị m ọbara ọgbụgba ahụ nwere ike ibute m, mana ọ bụrụ na enwere m isi mgbu. Ọ pụtara na m tụrụ ime? Achọrọ m ka ị zaa m ozugbo enwere ike, daalụ nke ukwuu
ajụjụ m bụ ihe ndị a: were ọgwụ, maka na akpachabeghị m anya! ma mgbe otu izu gachara condom, ya mere m were ya ọzọ… ọ na-arụ ọrụ? Kedu nsogbu ọ nwere ike ibute na ahụ m ebe ọ bụ na oge dị n'etiti otu na nke ọzọ dị mkpụmkpụ.
Ajuju m bu nke a: Enweela m mmeko nwoke na nwanyi na-enweghi ogwu wee rie ogwu a, O KWES ONER ONE IHE KWES WER ONE IHE NA-EME NA condom mebiri ma m were ya ọzọ ọ ga-arụ otu ọrụ ka ọ ga-eme ka ọgwụ ahụ ghara ịdị irè? ahụ? n'ihi na oge dị n'etiti iwere otu na nke ọzọ dị obere
Mkpụrụ ọgwụ ndị a dị mma ọ bụ ezie na ejikwara m condom n'otu oge ahụ ma onye gị na ya anaghị ejedebe n'ime gị kama ọ bụ n'èzí ka ọ dị
Zaghachi Hazell Alexandra Sequeira Jimenez
Ọ dị ka ọ dị oke mma mana ọ ga-amasị m itinyekwu ozi gbasara ya
Ndewo ... M na-ahụ mmekọrịta .. na ụbọchị ọzọ m na-ewere ọgwụ nke ụbọchị mgbe!
Ya na izu mụ na ya nwere mmekọrịta, naanị m pụọ !!! Kedu nke na-eme??? zaanụ m biko
Zaghachi vanesa ..
Ndewo, ajụjụ m bụ, enwere m mmekọrịta na October 13 na 16 nke otu izu ahụ, nke bụ nke enwere ike ịme, mana na 13, dịka ọ bụ ụbọchị ikpeazụ n'ihi na echekwabara m, m na-a theụ ọgwụ ndị ahụ, na 16th, enwerem iru ala karia ka m nwee nkasi obi, mana amaghim ma onwere ihe mere m n'ihi na m theuru ogwu, emeghi m ozo ozo ma obu otua. Nke iri na isii ebe o bu na m laghachiri na nke iri abuo na abuo wee biakwute m n’abali iri abuo na isii. jane
Ndewo… A takenụla m ọgwụ ahụ, m ga-achọ ịma ma mgbe oge m ga-abịa, m nwere ike ịtivesụ ọgwụ mgbochi m gara nke mbụ.
Nsogbu m bụ na ọnwa abụọ gara aga dọkịta gwara m ka m kwụsị ịcepụ ọgwụ mgbochi ime ma were condom lekọta onwe m ọnwa ole na ole. unyahu ka mu na enyim nwoke dinaa, o wee gbajie condom. Taa m gakwuuru dọkịta wee gwa m na ọ naghị atụ egwu mkpụrụ ọgwụ nke ụbọchị mgbe xke nwụsịrị, mana m ka were ya ... ugbu a, enwere m obere ikpe ọmụma xke oge ụfọdụ m na-eche na ọ bụ . Dọkịta gwara m na mgbe oge m ga-abịa na-amalite ị takingụ ọgwụ mgbochi mana amaghị m ma m nwere ike ị takeụ ọgwụ ndị ahụ.
"SOMFỌD state na-ekwu na iji mkpụrụ ọgwụ a abụghị ihe arụ, ebe ọ bụ na ha na-elekwasị anya naanị na ọrụ anovulatory nke mkpụrụ ọgwụ ahụ, ma ọ bụ n'ihi na HA B CONGHS IDBSR ov na ovum ahụ na-amụba, tupu ịkụnye ya, dị ka Ndụ ỌH NEWR NEW."
Nwere ike igosi m na n'oge a tụrụ ime (njikọta spam na akwa) BEREGH L Ndụ? Nwere ike ịnwale ya?
NA Ọ B ITR IS na ọ bụ ndụ ọhụụ, YOU NA-EGBUP ?TA ya?
Ọ B IFR YOU N’ YOUB JRO N’OB YOUR, N’ ,B REA, DO NA-EZU EGO N’IHU ỌGW NEW ND NEW ỌH??
HA NA-ECHE NA-ECHICHE.
Abughi m dibia ma amaghi biology, ana m agu akwukwo abuo (o dighi aru, o dighi onu)
otu m ga-esi ghara ime nyocha nke m.
N'AGBANYERE Ọ B IFRIFE NA Ọ BIFEGHIFE NDIFE, N'AGB THEY B THEY N'AGB KGHILL I gburu ya ...
Gbanwee ihe ize ndụ nke iwepụ afọ ime? Ọ D SE KA Ọ BOG N’OGBỌCHOG, N’ORDOR AHALA AH HEA, N’AT NGH C IZI OZI
Zaghachi ka ana azuta
gaa na nke dị n'elu ..
Ọfọn, ọ bụ ajụjụ dị mfe .. Ọ bụrụ na ovum ahụ fatịlaịza ma etinyeghị ya, ọ gaghị enwe ndụ. Ovum ahụ na - amalite ịba ụba sel na - enweghị ihe ọ bụla ọzọ ma chọọ ịmịnye ya n’ime akpanwa iji nwee ike zụlite onwe ya ma tolite. Ka I nwee ike ighota, gini g'eme ma oburu na ewere akwa nne okuko hapu ya na tebulu gi ... I chere na okuko muru ebe ahu? I nwere ihe ọ ga - eme ka amụrụ gị mana ọ gaghị amụ ya n’ihi na ọ chọrọ nne ya ... nke a bụ otu.
Ime afọ na-agwụ ime mgbe embrayo na-etolite na ọgwụ a na-anwa igbochi spermatozoa ma gbalịa igbochi ịkụbanye.
Ndewo .. Enwere m ajụjụ: M theụrụ ọgwụ ahụ ụbọchị abụọ m nwechara mmekọahụ, na mgbe ụbọchị ise gachara, m gbara ọbara, mana ọ bụ naanị ụbọchị anọ ma m na-ahụkarị ụbọchị asaa ... m ga-abịa oge ọzọ mgbe ụbọchị 5 gachara. kwuru ọbara ọgbụgba?
hello, gini bu ihe di iche na mbadamba 1 ma obu mbadamba abuo? n'ihi na m were mbadamba 2 ma ugbu a, m na-agụ na enwere 1. dị ka ọ ka gafere awa 2 na anyị ga-echere iji were nke abụọ. Kedu ka m ga-esi mee?
N'ezie, ọ bụ n'ihi na ọgwụ ahụ ekwesịghị ịbụ 1.5 mcg, na enwere mkpụrụ ọgwụ na-abịa 1 otu ọgwụ na ndị ọzọ nwere ọgwụ 2 nke 0.75 mcg ọ bụla, ọ bụ ya mere na ọgwụ nke abụọ na-ewere pill mbụ ma na-atụ anya 12. oge maka ọgwụ nke abụọ.
Zaghachi José R
hello I mestrue na October 9 mgbe ewepụrụ oge ahụ, condom mebiri wee were ọgwụ ahụ maka awa 48 na awa 24 mgbe m nụsịrị ya, ọ bịara m dịka enweghị ọbara ọgbụgba ma ọ dị otu izu mana ugbu a ọnwa nke November emeghị bịakwute m.
mkpụrụ ọgwụ ụtụtụ bụ ọgwụ mgbochi, nke a na-enye ọnụ n'ime awa iri asaa na abụọ inwe mmekọahụ n'enweghị nchedo kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ daa. ọ dị na ahịa ọgwụ, yana n'efu n'ụlọ ọgwụ. pleasemụ agbọghọ biko lezi anya STDs (ọrịa a na-ebute site na mmekọahụ) na-arị elu. biko mara
Ndewo, lee, enwere m enyi, onye na-aga mkpụrụ ọgwụ ya nke 6 wee chefuo ịnara ya ụbọchị ahụ, ọ na-ewere ya na 20: 11pm ma ana m ewere ya n'echi ya na XNUMX nke ụtụtụ ma ụbọchị ahụ ana m ewere ya ọgwụ kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ, ya na enyi ya nwoke nọrọ ụbọchị abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ naghị elekọta onwe ya ụbọchị abụọ ka mmekọrịta ahụ gasịrị, ọ zụtara ọgwụ ahụ n'echi ya, enwere ihe egwu ọ bụla? biko zaa !!!
Ndewo, enwere m mmekọahụ na Fraịdee 27 na taa na Mọnde nke iri atọ m chọrọ ị theụ ụtụtụ mgbe mkpụrụ ọgwụ ga - arụ ọrụ maka m? Biko zaa ngwa ngwa, a na m atụ ụjọ!
Kedu maka anya m nwere ajụjụ m nwere mmekọrịta otu izu gara aga na enyi m nwoke ọ bụ oge mbụ maka anyị abụọ n'echi ya ka m Iụrụ ọgwụ ahụ ebe ọ bụ na nke ahụ mere ya ahy mmm mgbe ahụ nke ọma n'eziokwu na anyị enwebeghị mmekọahụ ọzọ mana Amaghi m ma oburu na anyi etinyeghi condom ma obu anyi dọwara ya ma obu na anyi amaghi ma o mebiri ugbu a anyi na-atu egwu ebe m choro i tou ogwu ozo ozo aburula ubochi ise kemgbe m buru nke mbu otu na ọ ga-abụ oge ikpeazụ m were ya na m ga-enwe ihe na-ezighi ezi M nwere olileanya na azịza gị ma ọ bụrụ na m kwesịrị, daalụ
Ndewo ụmụ agbọghọ, achọrọ m ịgwa gị na oge m kwụsịrị na Ọktọba 31, anyị na enyi m nwoke nwere mmekọahụ na Tuesday, Nọvemba 2, anyị gara n'ihu ruo mgbe anyị ghọtara na condom mebiri. 3 awa mgbe ị matara, were ọgwụ nke ụbọchị mgbe mbadamba n'ihi na anyị na-atụ ụjọ. Oge m laghachiri na Disemba 4, ya bụ, ụbọchị 34 ka e mesịrị, atụla ụmụ agbọghọ ụjọ na mkpụrụ ọgwụ na-arụ ọrụ mana anaghị eji ya oge niile n'ihi na ọ nwere ike iweta nsogbu na ahụike gị, ana m akwado ka ị jiri ya na mberede. Trankilas na ndụ dị mkpụmkpụ ma anyị ekwesịghị ịta ahụhụ nke ukwuu. Na ha na-eji condom ma ị na-eji ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na ndị enyi ị susuo ọnụ m na-ezigara ha ya na ọfụma niile :::
Ndewo .. Ọ ga-amasị m ịme obere ndụmọdụ .. mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, anaghịkwa m echekwa ọgwụ m ga-eji na-echekwa onwe m.! ihe mere n'izu gara aga .. na izu a, enwerem mmekọrịta ọzọ na m mere otu ihe ahụ. Achọrọ m ịma ma ị thisụ ọgwụ a ọtụtụ oge n'ime ọnwa adịghị eweta ụdị nsogbu ọ bụla ..
Echere m azịza gị
M ga-enwe nnọọ ekele
Kedu ihe dị iche na mkpụrụ ọgwụ na-eme kwa ụbọchị na mkpụrụ ọgwụ ụbọchị abụọ n'ihi na m ghọtara na e nwere ụdị ọgwụ abụọ, otu nke na-egbochi n'ime awa 72 ka ị gachara mmekọahụ na nke ọzọ bụ nke na-enwe mmetụta na igbu oge obere ihe karịrị otu ọnwa achọrọ m ịkọwa ihe niile metụtara mkpụrụ ọgwụ ụbọchị abụọ-n nke ahụ bụ maka igbu oge na-erughi otu ọnwa achọrọ m ịmara ihe niile gbasara pill ahụ. Daalụ nke ukwuu!!! nsutu
Gini mere m ji were ogwu ogwu myiyi mgbe awa 2 ya na enyi m nwoke ghichara, nke a o di irighiri?
: s zaa m biko ngwa ngwa!
Ndewo ọnwa a ma ọ bụ Disemba m nọrọ na 6th na enyi m nwoke na anyị anaghị elekọta ibe anyị na nke ahụ mere, mana n'ụbọchị nke atọ m na-a theụ ọgwụ ahụ na 14th otu ihe ahụ mere na n'ụbọchị nke atọ m weere ọgwụ !! Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị takeụọ ọgwụ abụọ ma ọ bụ karịa n'otu ọnwa? ọ na-enwe mmetụta ??
Ihe kariri otu onwa gara aga, echefuru m ogwu ogwu nke ato ma n’echi ya amataghi m echefuru ya ma were otu ... mu na enyi m nwoke no, n ’echi achoputara m na echefuru m uzo nke ato na mu Ebuuru m ya .. Ekpebiri m ị theụ ọgwụ ahụ n’echi ya, ọ ga-abụ na m itụrụ ya ihe na-erughị awa 3 mgbe mụ na enyi m nwoke nọ. Mgbe ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ gasịrị ihe aja aja bịakwutere m, ha na-ekwu na ọ bụrụ na mkpụrụ ọgwụ ahụ rụọrọ gị ọrụ, ọ ga-abịakwute gị. 24 ụbọchị tupu ụbọchị nke ịhụ nsọ ọ bịakwutere m ọzọ dị ka aja aja a, na ụbọchị na-abịa kwa ọnwa m na-ahụ nsọ m nke ọma, nke ọma .. ọfụma mere n'ọnwa ahụ, ugbu a amalitere m igbe ọgwụ ọzọ n'ahịrị 5. ma enwere m afọ siri ike ... na enwere m obere ntụpọ na ara m, ụmụntakịrị. otu n'ime ndị enyi m dị ime ma nwee ndị ahụ mana ọtụtụ ... M na-atụ egwu. Ekwesịrị m ịgwa m ma enwere m ohere ịtụrụ ime
Emechara m nwee mmekọ, ọ na-ekwu na anaghị m agwụ, ekwetaghị m ya, achọrọ m ị theụ ọgwụ ahụ, ị ​​na-adụ m ọdụ ka m mee ya? Enwere m ike ịzụta ya ozugbo na ahịa ọgwụ ??? na-enweghị ndenye ọgwụ
LEE M nwere mmekọahụ n'enweghị nchebe, mana oge ahụ ka ga-abịa, agbanyeghị m Iụrụ ọgwụ mbụ tupu elekere iri na abụọ, ma n'echi ya ọ bịarutere; Ajuju m bu: Kemgbe o rutere, odi nkpa ka eji ogwu ogwu nke abuo?
Naanị m tinye mkpịsị aka m…. Achọrọ m ịma ma m nọ n'ihe ize ndụ nke ịtụrụ ime = n'uche m tookụrụla ọgwụ ahụ mana achọrọ m ịmara iji hụ ma m ga-enweta karịa ma ọ bụrụ na m ga-ewere mkpụrụ ọgwụ n'otu mkpịsị aka n'ihi na $ ezughi oke m ebe m ugbua emebiri si laburo… .. na-ekwu okwu ma mechaa ma mechaa !!!!
Enwere m obi abụọ…. Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na enyi m nwoke kwụsịrị n'ime m 3 ugboro n'otu abalị ... na 4 na nke ọzọ ... Enwere m ike ime afọ ime ... echeghị m, mana ọ bụrụ na m jụọ ...
Enwerem ajuju mu na enyi m nwoke no, m wee banye ugboro 3 n’ime abali ano na nke ozo…. Enwere m ike ịtụrụ ime? Echere m na ọ bụghị ma ọ bụrụ na m jụọ!
Ndewo, achọrọ m enyemaka .. nsọ nsọ m ikpeazụ bụ na Disemba 16, 2009 na mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta na-enweghị nchebe na Jenụwarị 3, 2010 na 1 n'ụtụtụ, mana ọ bụ mmekọrịta mụ na ya kwụsịrị n'ihi na ọ wepụrụ amụ ya tupu ejaculate .. oge m dị n'etiti ụbọchị 23 na 26 .. Ọ ga-amasị m ịmara ma m na-agba ọsọ n'ihe egwu .. ma ọ bụrụ na m ga-ewere ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara ..
Achọrọ m ka ị nyere m aka biko enwere m obi abụọ ọ bụla na Fraịdee enwere m mmekọahụ na Satọdee m na-a theụ ọgwụ ndị ahụ na Mọnde m nwee mmekọahụ ọzọ na Tuesday m were ha ọzọ ma ọ bụ n'ụzọ doro anya, anọ m ụbọchị ezumike m ga-achọ ịma ihe Ihe mgbagwoju anya m nwere ike inwe na ahụ m ma ọ bụ ọ bụrụ na nke a na-emetụta m na ihe biko zaa n'ihi na ọ bụrụ na m na-echegbu onwe ebe ọ bụ na echere m na mkpụrụ ọgwụ ndị a nwere ike iji dịka usoro igbochi afọ mgbochi ma achọpụtara m na ọ bụghị ya
Enwere m obi abụọ na ejiri m mkpụrụ ọgwụ nke ụbọchị mgbe yuzpe m were ha n'oge egosipụtara ihe na-eme na 7 awa mgbe m nụsịrị ọgwụ nke abụọ m na-agbanye ma ọ bụghị nke ukwuu, ihe m chọrọ ịma bụ ma mkpụrụ ọgwụ ahụ ọ ga-enwe otu mmetụta ?
Enwere m ajụjụ, enwere m olileanya na ị ga-aza m n'ihi na ụjọ na-atụ m .. Mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, ọ wee banye n'ime m n'amaghị ama, ụbọchị 2 gafere wee nwee mmekọahụ ọzọ wee banye n'ime m ọzọ Rịba ama na m mechara nke na-esote ụbọchị m na-ewere ọgwụ ahụ .. ọ gwakwara m na na mbụ ọ gwụla n'ime m ya mere ajụjụ m bụ Pill bụ naanị awa 72 ma echere m na m gafere, ọ dị mma Adị m ime? Ma obu na onwa m ga-egbu oge .. echere m na i za m maka na m na echegbu onwe m, daalụ maka itinye uche gi
Ndewo, Achọrọ m ịjụ ajụjụ: Mụ na enyi m nwoke nwere oge mbụ na Jenụwarị 4 ma anaghị m agwụcha ịbanye n'ihi na enwere m ahụ erughị ala mana agbanyeghị na 15: 4pm M zụtara ọgwụ ahụ n'echi ya ma echegbu m ... Enwere m irighiri akwara ma na-eche ụra nke ukwuu Achọrọ m ijide n'aka na m atụghị ime, enwere ohere na m na-a Iụ ọgwụ 12 kwa awa iri na abụọ ọ bụla ... ọ dị mma ka ọ bụ obere ihe m kwesịrị ị takenụ? I meela, enwere m olile anya na nzaghachi gị
Ọ bụrụ n ’ị takeụ mkpụrụ ọgwụ n’ụbọchị nke anọ, ọ ka nwere mmetụta ọ bụla ???
Ndewo, ajụjụ m bụ ihe ndị a:
Enwere m mmekọahụ na nwanyị na-enweghị nchebe ma n'ihe dịka awa 30 mgbe nke ahụ gasịrị, ọ were usoro mgbochi mgbochi mberede, nke gụnyere mkpụrụ ọgwụ 4 na mbido yana 4 mgbe elekere 12 gachara. ọ nọ na ụbọchị nke iri na abụọ ma ọ bụ 12. Nsonaazụ nke ị takingụ ọgwụ a bụ dizziz na ahụ ike izugbe. ruo ugbu a (ụbọchị 13 nke oge gị) ka enweghị iwu. Otu ụbọchị gara aga ọ gbanyekwara ọzọ, mana oge a, ọgwụ mgbochi (mkpụrụ ọgwụ 25 na mbido na 5 mgbe elekere 5 gachara.). Site na nzụlite a, ọ ga amasi m imata ihe ịtụrụ ime. Ana m atụ anya nzaghachi ọsọ ọsọ.
Enwere m nlọghachi azụ 6 ụbọchị mgbe m gụsịrị iwu m nke bụ posivilidades m si na kedar dị ime
JOSI B. dijo
Enwere m mmekọrịta mụ na enyi m nwoke ụbọchị nke atọ nke mgbagha m, ọ zụtara m POSTINOL3 ka m were ya mana amaghị m ma ọ bụrụ na m ga-eme ya m kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na m nwere ike ịnata ọgwụ ma ọ bụ na agaghị m enwe oge ahụ. Anaghị m ewere ya, enwere m ike ịnọ na obere oge…. Zaghachi taa ọ dị ngwa
Zaghachi JOSI SER
Enwere m mmekọahụ mbụ m na Jenụwarị 7 nke afọ a wee jiri ntụtụ mberede, m were ya nke ọma, ọbara ọgbụgba, mana enweghị m ma ọ bụ ịgha agbọ na ụbọchị ndị ahụ, obere ntakịrị ụjọ ụbọchị ole na ole mgbe ka m jiri ya na ọnwa m rutere ụbọchị a na-atụ anya ya na Jenụwarị 22, ụbọchị nke m bụ .. ma ugbu a n'izu ruo ebe a, enwere m anya nro, ụda isi m ma echere m na m gaara atụrụ ime n'agbanyeghị na m nwere arụọla ọchịchị m ọ bụ eziokwu? nyere m aka plizz azịza
A ga m acho ka ị kowara m obere obere ihe eji ogwu ogwu a ... ebe obu na m ga enwe oge izizi ... ana m atu obere egwu nihi na achoghi ime m ..
Ola m na enyi m nwoke nwere mmekorita nke oge 5 n’enweghi nchebe ma awa ole na ole emesiri mu were ogwu ahu n’echi ya ... ma ubochi ano gasiri, enwere m obara obara, gini ka obara a putara? Ma mgbe m nwesịrị mmekọahụ, anọ m na-eweta ma ọ bụ na-asọ oyi na-asọ oyi ma yabụ ... nke bụ eziokwu, ana m atụ ụjọ ịtụrụ ime, biko nyere m aka!
Ndewo! Anaram ubochi nke uto mgbe mu na enyi m nwoke nwee mmeko, m riri ihe prophylactic mana o mebiri.Meburu m ya ruo ụbọchị 5 ma enwere m ọghọm, ọ bụ ihe nkịtị?
Zaghachi ka mic
Ndewo, enwere m obere ụjọ, m ga-achọ ịma ma mkpụrụ ọgwụ ahụ maka ụbọchị echi ọ dị oke mma ka m wee ghara ịtụrụ ime, nsogbu m bụ afọ mụ na enyi m nwoke na-enwe mmekọahụ n’echi ya m tookụrụ ọgwụ ndị ahụ na-egosi; Otú ọ dị, ọ tụrụ m n'anya na mgbe ụbọchị 1 na 16 gachara m ………………
N'afọ a otu ihe ahụ mere m, n'agbanyeghị na m tookụrụ ọgwụ ndị ahụ ọzọ, eburu m ime ……………. Aghọtaghị m ihe kpatara ya, ọ dị nwute na nwa m nwụnahụrụ m. ??????. Asi m ka mmadu kowara m ihe a
Ndewo, achọrọ m ịjụ, m na-adịghị agbanwe agbanwe na Jenụwarị oge m dị na 26th na 31st m nwere mmekọahụ n'echi ya m na-a theụ ọgwụ ahụ n'echi ya, na 5th enwere m ọbara ọgbụgba ụbọchị 4, ana m atụ ụjọ. n'ihi na amaghị m ụbọchị m ga - abịa ugbu a Onwa Mach, agụrụ m ọbara ọgbụgba ụbọchị anọ dịka oge nke ọnwa Febụwarị amaghim ma ọ dị otu a. Achọrọ m azịza ngwa ngwa iji biko
Zaghachi nye eve
Edoziri m oge na-ezighi ezi ugbu a
Gịnị na-ewe ogologo oge iji zaa?
Ndewo, achọrọ m ịjụ gị ajụjụ… .M nwere mmekọahụ na February 27 na-enweghị nchebe, n'otu elekere na ọkara m theụrụ ọgwụ ahụ .. taa bụ iri na otu na ọ nweghị ihe na-eme .. n'elu ya pesons na-afụ ụfụ… M wee ule ma o nyere m ihe ojoo .. emesiri mgbe m ga ogwu ogwu, ule a o na-eme ka m jide n'aka? ma obu m kwesiri icherekwuo?
Ndewo, agụrụ m ọtụtụ ozi gbasara mkpụrụ ọgwụ, ọ dị mma na agaghị m a neverụ ya, n'ihi na m na-elekọta onwe m mgbe niile. Anọ m na di na nwunye ma nye ya ikpe na ọ naghị elekọta m, ọ dịkwa mma n'okwu ahụ? Daalụ nke ukwuu
ndewo, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọahụ ụbọchị tupu oge m ga-ahụ, ọ ga-abụ na ọ dị ime
Ndewo, na 24th, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta ma ọ bụ naanị tinye isi ya, nwa agbọghọ m na-amaghị nwoke na-efunahụ m ma ọ bụghị nke ahụ, mana ọ na-emesi obi ike na ya anaghị ejide m kama agbanyeghị, na 25th, ejiri m ọgwụ ahụ Elekere itoolu n'abalị na nke ọzọ na awa iri na abụọ. 9 nke ụtụtụ na nke ọma, kedu ka ọ si pụọ n'ime m, mana a hapụrụ m nnukwu obi abụọ na ụjọ, aara m ọgwụ ahụ ugbu a Ọbara 12 na mmamịrị, gịnị kpatara m ga-atụrụ ime? Biko gwa m ka m zaa m ..: S
Ndewo, a haveụwo m mkpụrụ ọgwụ na-esote ụbọchị ole na ole, ihe dịka ugboro 10 (n'ime afọ 1). Ihe karịrị ọnwa anọ gara aga ewebeghị m ya. Ọ ga-amasị m ịmara ma nke ahụ emetụta ọmụmụ m ma ọ bụ ịtụrụ ime n'ọdịnihu. Daalụ
Ndewo, May 21 bịakwutere m… .Abọchị ole na ole gara aga, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta ma anyị akpaghị onwe anyị anya… ụbọchị abụọ gafere ma m ga-achọ ịma ma mkpụrụ ọgwụ nke ụbọchị ga - amalite effect na ọ bụrụ na ọ ga-enwe mmetụta nke ịhụ nsọ ma ọ bụ na ọ bụghị?… Ọ bụrụ na m weere ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara, agaghị m atụrụ ime ?? .... Achọrọ m nzaghachi ngwa ngwa .. daalụ
na vdd Enwere m mmasị na ibe a ebe ọ bụ na m si na ọtụtụ obi abụọ & pụọ na ezigbo ozi zuru ezu & doo anya !! Daalụ!
Agara m ọgwụ ahụ ebe ọ bụ na enweghị m ihe karịrị otu awa mụ na di m nwere mmekọahụ, condom wee pụọ, enwere m ike ịnọ jụụ
Enwere m ajụjụ, a tookụ m ọgwụ ahụ, mensuration bịara ụbọchị atọ mgbe e mesịrị na otu izu mgbe m werechara ya, enweghachiri m mmekọahụ ọzọ, m kwesịrị ị itụ ya ọzọ? ka mmetụta mkpụrụ ọgwụ a ọ na-eme adịghị mkpa?
Na 19th nke ọnwa a, enwere m mmekọrịta na-enweghị nchebe mana na Mọnde 21st nke ọnwa a dịka elekere 12:30 nke abalị m na-a theụ ọgwụ ahụ n'echi ya ma mgbe awa 12 gasịrị m were nke na-esote ọ ga-enwe otu ihe ahụ dị irè xfa zaa m biko !
Zaghachi iji agọnahụ
LELE m anabatabeghị ọgwụ ahụ, soro gị ruo taa, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọ na Satọdee elekere iri nke abalị n'abalị na-esote ụbọchị m na-ewere mkpụrụ ọgwụ mbụ n'ihi na mbadamba ụrọ na-abịa 10 m were ya na 2 pm mana echefuru m na-nke abụọ mgbe elekere iri na abụọ M na-ahapụ 2 na-esote nke mbụ m na-echegbu, ọ ga-mmetụta ma ọ bụ m ga-atụrụ ime? Daalụ
Aller gụchara nsọ m, mụ na enyi m nwoke wee nwee mmekọahụ.
Enwere ike ịtụrụ ime?
Nnọọ. M na-a theụ ọgwụ nke ụbọchị mgbe ọ bịakwutere m, mana obere na naanị otu ụbọchị. Ọ bụ nkịtị?
Echegbula, m were ya mgbe 72 awa na ọ bịara m, ma m na-echegbu onwe n'ihi na ọ bụ naanị n'ihi na otu ụbọchị. Emere m ule ime nwa ma ọ laghachi azụ
Achọrọ m ịma ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ọgwụ ndị a na - ata nri oge ọ bụla ... maka na m nwere obere ihe ọghọm na ọnwa atọ m na - a oneụ otu kwa ọnwa ... helpaaaaaaaaaaaa
N'abalị ụnyaahụ, anyị nwere nsogbu condom na enyi m nwoke ma dịka ịdọ aka na ntị, anyị tụlere ịtụtụ ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara. Enwere m ọgwụ mgbochi, ọ ga-amasị m ka ị nye m ndụmọdụ…. Daalụ nke ukwuu!
Ndewo ihe m na-eche bụ ... M nwere mmekọrịta na July 31, Ọgọst 2, were ọgwụ mbụ nke ụbọchị a, n'ụbọchị nke atọ nke abụọ. MGBE M nwere njikọ na August 3 Ọ B IFR PR na nchedo ma ọ kwụsịrị n'èzí, Apụrụ m oge ahụ na Ọgọst 14 ruo ụbọchị na-esote. NA DABỌCH 15 20 MA Ọ B 19 14, ara m na-emerụ ahụ ma na-egbu egbu nke ukwuu Enwere m isi ọwụwa na obere ihe mgbu. Daalụ m na m na-echere nzaghachi gị n'oge na-adịghị anya.
Enwere m ajụjụ ụnyaahụ enwere m mmekọahụ ma anaghị m elekọta onwe m ma n'echi ya enwere m isi ọwụwa ma amaghị m ma m dị ime ma ọ bụrụ na m were ya ugbu a, mkpụrụ ọgwụ ahụ ọ ga-arụ ọrụ?
Ndewo, a bụ m nne ọnwa abụọ, ị na-ahụkarị ịmụ nwa, kedu ka m ga esi mara ma m dị ime?
Lee m a takenụla ọgwụ ahụ ugboro isii n'ime ọnwa 6 ma taa ewerela m ịrọ òtù na afọ afọ m na-afụ ụfụ na m na-atụ ụjọ na ọ nwere ike inye m ihe m na-amaghị ma na-agba ọbara ọbara abụọ, ọtụtụ ụmụ agbọghọ biko zaa m
Abụ m Dr. Andrea, echekwara m na taa e nwere ọtụtụ ihe ọmụma na-ezighi ezi banyere igbochi mgbochi mberede, ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eji usoro a eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ihe kachasị echegbu onwe gị bụ inwe mmekọrịta na-enweghị nchebe na-atụkwasị mkpụrụ ọgwụ a obi, mgbe ọ bụ n’ezie ọ bụ maka mberede. Enweghịkwa ya ịgakwuru dọkịta tupu iji ya, n'ihi nnweta ọ dị mfe na ụlọ ahịa ọgwụ, mana mgbe i jiri ha, ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ nwere ike ịbịa na ọ dị mkpa iso dọkịta ahụ kwurịta ya.
Na 07/08 anyị na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, anyị nwere ihe mberede na condom. N’echi ya, mgbe m gachara awa iri abụọ na anọ, m tookụrụ ọgwụ ahụ. On 24/16 m hụrụ nsọ, mgbe m kwesịrị nsọ na 08/01. Mgbe ahụ ọ dịghị ọzọ bịara. M na-abịakarị ụbọchị 09 ọ bụla ma ụbọchị 25 agafeela. Biko, Ana m atụ anya nzaghachi.
Ndewo, abum nwoke na-echegbu onwe ya, mana ụnyaahụ ka m mere ihe m na-ekwesịghị ime, ejiri m aka m na obere snail gaa, mana echefuru m ịzụta akpa lollipop. Enweghị m ike ime ihe ọ bụla ebe ọ bụ na ọ dịlarị osisi, metụ ntakịrị aka ma ọ na-awụfu n'oge dị mma n'ihi na nke abụọ na-ewe ogologo oge karịa enweghị m ike ijide agụụ ahụ ma emere m ihe m kwesịrị ime mgbe awa 24 gachara ịkwụsị mgbe ahụ mgbe m biliri ziga zụta viagra.
mgbe ahu biara mandingo amaghi m ihe m ga - eme masiri ya isi ya dika apple apple.
Kemgbe ubochi a agbazela m n’amara na m jidere n’ahụ nwoke
Hapu onwe gi ka m gha agwa gi.
att: horny renzo aliga na jarlin michel lopez carranza na leoncio ledesma alvaradop na jhonatan panduro aliga ha niile sitere n’otu m.
si tarapoto peru
atte: giancarlo wiil
Ọ bụrụ na m were mkpụrụ ọgwụ "Soro gị" Unidosis.de LAboratorios Raffo, nkeji tupu mụ na nwoke enwee mmekọahụ na n'oge m na-azụ nwa (n'otu oge) ọ na-arụ ọrụ karịa ma ọ bụ na-erughị ya karịa ma ọ bụrụ na m were ya ọtụtụ awa mgbe e mesịrị? Daalụ.
Ndewo, enwere m ajuju. Ọ bụrụ na m nwere mmekọrịta na-enweghị nchebe na Fraịdee ma ewere m ọgwụ mgbochi mberede na Satọde na Sọnde enwere m mmekọrịta ọzọ na condom agbaji. Ekwesịrị m ịhụ ọgwụ mgbochi mberede ọzọ ma ọ bụ nke m were na Satọde ka na-emetụta m
Ndewo, ajụjụ m bụ na m were ọgwụ nke ụbọchị ahụ, soro ya na 10 na nke abụọ nke abụọ kwesịkwara ịnara ya na 10 mana ejiri m nkeji 4 chee na ihe mere ???? Atụrụ m anya na anaghị m ekwubiga okwu ókè na-ekele gị, Ana m echere azịza gị
ajụjụ m bụ azụ na-achị
Achọrọ m ka ị nyere m aka! Ọ bụrụ na m were ọgwụ a nke ụbọchị mgbe ọnwa gara aga aga m achọ ịma ma ọ bụrụ na m Iụọ ya ọzọ ugbu a ihe ọ ga - eme?
Ndewo, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta 0 na 26th na 11 nke ụtụtụ ... mkpụrụ ọgwụ a ọ nwere mmetụta ọ bụrụ na ọ bụ taa? biko achọrọ m azịza ozugbo enwere ike grax
Zaghachi iji florence
Izu uka gara aga mu na enyi m nwoke nwere mmeko? A tookụrụ m ọgwụ ahụ n'echi ya ... oge m rutere kpọmkwem na ụbọchị emepụtara ... mana ọzọ na ọnwa ahụ ...
nke a bụ n'ihi na ... ọ bụ n'ihi mkpụrụ ọgwụ ... ???? DAALỤ..
ndewo .. eziokwu na anaghị m eme zoy muzho d iji laz paztillaz, mana m ka mma ilekọta onwe m, ma soro onye m hụrụ n'anya kwurịta ya ọ bụghị ze zi zta nke ọma na m na-ewere paztilla dl n'echi ya mgbe m nwesịrị mmekọahụ , ozea dezpuez d 5 minitz maz o Menoz were nke mbụ were na dezpuez d laz awa iri abụọ na nke ọzọ, mana ọ bụghị zabia qe zolo bụ maka cazoz ezpecialez, na oge ikpeazụ m na-eme mmekọrịta bụ ụnyaahụ, enweghị ze zi ezto nwere ike ibute imara ihe ojoo ???
Ọ dịkwa mma na m na-ewere Paztilla dị ka ihe mgbochi mgbochi mgbe ọ bụla m nwere mmekọrịta ma ọ bụ ị kwadoro ọgwụ ọzọ… ???
Ọfọn, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọahụ na June 24 na-enweghị nchebe wee m were ọgwụ ahụ na June 27 ma ewere m naanị otu mana na ntuziaka m kwuru 2 kwenyere na ọ ga-emetụta mmetụta Amaghị m ihe m ga - eme m na-atụ egwu na naanị nrịbama nke nyere m bụ ike ọgwụgwụ na isi ọwụwa gịnị ka m na-eme, nyere m aka
Nnọọ!! Achọrọ m ịma ụmụ agbọghọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka. Emechara m ị takingụ ọgwụ m kwa ụbọchị, a na-akpọ ha diane 35, yabụ oge ọ bụla a gwụchara m, m ga - anọru ụbọchị atọ n’emeghị ya, bido nke ọhụrụ. Kedu ihe na - eme n’ụbọchị ikpeazụ m ga - ewere ọgwụ ikpeazụ ahụ mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, yabụ enwere m obi abụọ ma ọ bụrụ na m were ọgwụ mgbochi mberede, wee nye ohere maka ụbọchị 3 kwekọrọ .. Kedu ihe m ga - eme ụmụ agbọghọ na - enyere m aka?
Ndewo na ngwụcha izu a enwere m mmekọahụ n'ehihie Fraịde, ụtụtụ Satọdee na ụtụtụ Sọnde, ee nchedo, na mmekọrịta dị na Saturday na Sunday onye mụ na ya na-arụkọ na n'ime abalị Mọnde m na-ewere mkpụrụ ọgwụ nke mberede oku glanique na m ga-achọ ịma ma m Anọ m n'oge ọgwụ ma ọ bụrụ na ha nwere mmetụta ma ọ bụ na ọ bụghị
Ndewo, lee, a ga m agwa gị, enwetara m oge m wee pụọ na Tọzdee nke ise na Fraịdee ụbọchị isii mụ na onye òtù ọlụlụ m nọ na nke mbụ anyị chefuru ilekọta onwe anyị anya, ya mere n'ụtụtụ Sọnde m weere ụtụtụ. Ozo ozo anyi na-elebara onwe anyi anya mana anyi nwere ihe ojoo na mkpuchi ahu gbawara ma taa, amalitere m ịmalite ogwu mgbochi, enwere m ike itu ime?
Enweela mmekọahụ na-enweghị nchebe maka oge mbụ na Disemba 17th ma oge m si na 11th ruo 15 nke ọnwa ahụ. Were ọgwụ ahụ n'echi ya mgbe mmekọrịta ahụ gasịrị. Nwatakịrị ahụ ejighi ọbara mee ka m gbasaa.
Daysbọchị asaa mgbe nke ahụ gasịrị amalitere m ịgba ọbara aja aja.
Enwere m ike ịtụrụ ime?
Ogologo oge ole ka ọbara ọgbụgba ahụ kwesịrị ịdịru?
Zaghachi na Tafy
Ndewo, ụtụtụ ọma ajụjụ: ọ bụrụ na enyi m nwoke ejedebe n'ime m x ihe atụ 15 ugboro n'ụbọchị n'echi ya, m nwere ike ị takeụ ụtụtụ mgbe pill gasịrị ọ ka ga-arụ ọrụ ma ọ bụ maka ịmịcha ọ bụla o nwere, achọrọ m ị theụ pill.
Umunwanyi ndewo, a nuru m ogwu a mana m nara ya n’ihi na m mere ule nke afọ ime ya adighi nma, aghaghi m ihu ya na 28/1/2016 ma abiaghi m na abali ato nke onwa ato na nke ato, kporo m dibia bekee. gwara m ka m zụta ya. N'ụbọchị ahụ na n'isi ụtụtụ nke ụbọchị ahụ, m jidere bomitos, dizziness na naucias ma ọ dịghị onye na-abịakwute m, ọ nwere onye nwere ike inyere m aka ma ọ bụ na m ga-eme ule ime ọzọ ọzọ.
Ndewo, enwere m ihe ịkụnye 1 afọ 6 ọnwa gara aga m wepụrụ ya otu ọnwa gara aga 5 ụbọchị gara aga enwere m mmekọrịta na-enweghị nchebe na n'echi ya m weere ụtụtụ mgbe ọgwụ m gasịrị bụ na m nọ na winstrol na primibolan sterols na-emetụta irè nwetụrụ ọgwụ m chọrọ ịmara ngwa ngwa, ana m echegbu onwe m, enwebeghị m oge 1 afọ 7
Hoola. Enwere m ajụjụ ma ọ bụrụ na ewere mkpụrụ ọgwụ ahụ n'echi ya mgbe ọ rụchara ọrụ?
Yesterdaynyaahụ m nwere mmekọahụ ma na 17th m mechara oge m na 24th enwere ohere ịtụrụ ime?….
Ndewo, enwere olile anya na ị nwere ike inyere m aka, ọ bịakwutere m na 15 nke ọnwa ahụ mere wee pụọ (ụbọchị 5) na 15 ụbọchị (nke bụ ebe m nwere ike ịtụrụ ime) enwere m mmekọahụ ma m banye na ya, ọ nwere ike ịbụ na m dị ime n'ihi na n'echi ya, m ga-a drinkụ ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara. Ma taa nke iri na anọ, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na ọ nweghị ihe bịakwutere m.
Ndewo Laura, ọ bụrụ na ị tookụ n'ụtụtụ mgbe ị gachara ọgwụ, ọ ga-abụ na ị dị ime, mana ọ gaghị ekwe omume. Daalụ!
Rocio Belen Fernandez kwuru dijo
Ndewo, achọrọ m iwepụ obi abụọ.Ma ọnwa Machị 23, e nwee m mmekọ nwoke na nwanyị, condom mebiri, m tookụrụ ọgwụ ahụ n'otu ụbọchị, oge ịhụ nsọ m gbadara n'abalị iri abụọ na asatọ. Ugbu a, enwere m mmekọahụ n'April 28th m weere pill n'ihi na ọ mebiri ọzọ na ihe na-eme m nwere ike ịtụrụ ime ma ọ bụ. Achọrọ m enyemaka biko
Zaghachi Rocio Belen Fernandez
Enwere m ike ịtụrụ ime na 22nd m gwụchara nsọ m na 23rd enwere m mmekọahụ ma ọ bịara na m bụ oge ụfọdụ
Zaghachi ka amba
Ndewo Amber, ee, enwere nsogbu. Daalụ!
Enyemaka!! N'April 15, enwere m mmekọahụ ma ewere m ọgwụ mgbochi mberede n'oge ahụ, na-akọwa na ọ kwụsịrị n'ime m mana m ka mere, ụbọchị 9 ka e mesịrị, anara m ule ma ọ bịara dị mma, ekwuputala m site na ikpu na ị nwere ike ịhụ agwa. Mkpụrụ ọgwụ ahụ ọ ga-ada? Ka ọ dịlarị ime?
Zaghachi Sara karina
Ndewo Sara, ma ọ bụrụ na ọ gbaghị ọbara n'ime gị, ọ ga-abụrịrị na ị dịlarị ime. Daalụ!
Ngwa ngwa .. Enwee m mmeko nwoke na nwanyị, m wee gbasaa n'ime ahụ m mgbe ọkara awa m were ọgwụ levonorgestrel, enwere m mmekọahụ na May 6 na nsọ nwanyị m bịara na Eprel 21, enweghi m nsogbu. Biko nyere m aka. Daalụ.
Ndewo, otu ajụjụ, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọahụ na Satọdee abalị, m theụrụ ọgwụ ahụ n'abalị Mọnde na 8: 30pm mana mgbe ahụ n'elekere 2:00 nke ụtụtụ amalitere m ịgbọ agbọ na m gara ụlọ ọgwụ ma nọ na ọbara ruo 5 n'ụtụtụ, enwere ike ịtụrụ ime biko zaa ya ngwa ngwa.
Ndewo Natali, o were ọtụtụ awa tupu ị gbọọ agbọ wee chee na ị gbụghị ọgwụ ahụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị hụ na iwu anaghị agbadata, nwalee. ekele!
Nke abụọ dijo
Enyemaka mụ na enyi m nwoke nwere mmekọahụ na nke mbụ ya na May 10 & na 11th m theụrụ ọgwụ ndị ahụ m nwere ike ịtụrụ ime n'agbanyeghị na ewerela m ọgwụ 0.75 e nwere mbadamba nkume abụọ mana m weere ha n'otu ụbọchị ọnụ na 18 : XNUMX pm mana m na-atụ ụjọ nke ukwuu ebe ọ bụ na ha enyeghị m mmetụta ọ bụla & n'akụkụ, agbanyeghị m ọbara ọgbụgba
Zaghachi E'sparza jaquelinn
hello enwere m ajụjụ, mụ na onye òtù ọlụlụ m nwere mmekọrịta otu ụbọchị tupu ụbọchị nke ọ bụ oge m ịpụ ma ghara iwere ihe ọ bụla, ụbọchị abụọ ka e mesịrị, anyị nwere mmekọahụ ọzọ n'ihi na anaghị m apụ apụ ebe ọ bụ na anaghị m eme ya mana Oge a ma ọ bụrụ na m were ọgwụ (nke otu mbadamba) wee pụọ mgbe otu izu gachara, ọ nọrọ ụbọchị na ọ na-adịkarị ka nke a mana na ụbọchị ikpeazụ nke ekwesịrị ịkwụsị, agbadara m ọzọ dị ka firstbọchị mbụ ruo mgbe m nwere colic, ọ bụ ihe nkịtị Nke a ọ na-eme n'ihi mmetụta nke ọgwụ ahụ? ...
Nnenna 123 dijo
Ndewo, aara m mkpụrụ ọgwụ ahụ mgbe awa 28 gachaa, condom mebiri ... kedụ ohere m nwere? Ọ bụ ụbọchị abụọ mgbe ọ nwụsịrị.
Zaghachi Mariavicc 123
Ndewo Mariavicc ma ọ bụrụ na ị belata ọchịchị gị ị gaghị enwe ohere ọ bụla. Mmetụta ya dị n'ime awa 72 mgbe mmekọrịta nwoke na nwanyị gasịrị, mana ka awa na-agafe site na 24 awa, mmetụta ya na-ebelata. Daalụ!
Ndewo m chọrọ ịma ihe nhụjuanya nke ọgwụ ahụ ọ bụrụ na ọnwa mbụ m were otu na ihe a na-eme m ka m nọrọ na ya na-enweghị ọrụ ọ bụla na m na-a THEụ ọgwụ ahụ nwere ike ime m, enwere m afọ ime.
Ndewo, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọahụ, ejiri m condom ma ọ nwere obere auger ma m banye n'ime. Enweela mmekọahụ na Fraịdee 10 na 12:30. na m na-a tookụ ọgwụ na Satọdee nke iri na otu, na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere abụọ nke ehihie, m weere ọgwụ ahụ 11. Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na ha amalite mmetụta ma ọ bụ ka m were ya n'otu ụbọchị nke mmekọrịta ahụ?
Ndewo Belén, ka awa ndị na-agafe na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, mana ọ na-emetụta n'oge mbụ awa 48/72. Daalụ!
Ndewo, na abali iri-abuo na isii nke onwa isii na onwa nke iri na isii n’omume n’omume n’enweghi condom, n ’echi m jiri ogwu ahu n’echi ya, mgbe onwa m biara na onwa iri na ano n’abali iri na ano, taa anyi bu June 26 ma onwa m abiaghi, emego m nwanyi Iko. ule wee pụta nke oma, na ụtụtụ ahụ emere m cytology mbụ ma ha emeghị ihe ọ bụla gbasara ma ha chere na ha tụrụ ime ma emesiri m ime ule ahụ ma ọ laghachiri, enwere m ụjọ na amaghị m ihe m ga-eme, ọ dị m mkpa ịmara ma m dị ime n'ezie. Achọrọ m enyemaka, achọrọ m ịme mkpebi biko nyere m aka.
Ndewo Ivonne, n'ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara anaghị arụ ọrụ mgbe niile. Ọ bụrụ n ’ịlele nwaanyi ọma ugboro abụọ, o yikarịrị ka ị dị ime. Chere ụbọchị ole na ole wee mee nyocha ụlọ ọzọ iji jide n'aka. Daalụ!
Ndewo, ajụjụ, gịnị na - eme ma ọ bụrụ na m nwee mmekọahụ ụnyaahụ June 20 na na 3 na ọkara awa m weere ụtụtụ mgbe pill gasịrị mana achọrọ m iwere ọzọ ma enwere obi abụọ n'ihi na achọghị m ka ọ daa ada n'ezie anaghị m ' chọrọ ime n'afọ ugbu a Ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike na nsonazụ ọ nwere ma ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụ ka njọ, ihe biko gbaa ha ume ka ha zaa
Ndewo, enweela m mmekọahụ na-enweghị nchebe 3 ugboro n'ọnwa na ugboro atọ m na-atụgharị n'ụtụtụ mgbe ọgwụ m ka na-enwebeghị oge m.
Kedu nke m nwetara ule ime nwa ma ọ laghachi azụ
Zaghachi Tammy Garcia
Nchegbu m bụ na José, ọ bụrụ na di m ejedebe n'ime m .. Nke ahụ bụ Fraịdee 1st na 11 n'abalị ma ọ bụ na ọ bụ Mọnde nke anọ m nwere ike iburu ọgwụ mgbochi mberede.
Ndewo, oge ikpeazụ m sitere na June 07 ruo 11, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta na 28th wee were ọgwụ ahụ na 29th na gburugburu 3 n'ehihie, mụ na onye òtù ọlụlụ m nwere mmekọrịta ọzọ n'abalị, emesịrị m enwe mmekọrịta na 01 Julaị ma ewere m ọgwụ ọzọ n’echi ya na Satọde, enwere m ike ịtụrụ ime? . Ọ bụ ezie na anaghị m etinye n'ime onwe m nke ọ bụla n'ime oge 3, ọ dị m ka m ga-ewere ọgwụ mberede. Biko ị nwere ike inyere m aka site na ịza ajụjụ m, m ga-enwe ekele maka ya.
Cheregodi maka enyi m jiri isi ọwụwa, aru na afọ were ụbọchị atọ, ị nwere ike ịgwa m ma ọ dị njọ ka m gakwuru dọkịta?
Ndewo… nwere ike m. Nyere aka na nke a biko ..
Na June 25, m Iụrụ ọgwụ mgbe m nwechara mmekọahụ ... na July 9, enwere m mmekọahụ na condom ma anaraghị m pill ...
Ugbua onwa a nke July onwa m adighi-arida, m ga-adi ime?
Zaghachi Leslie Perugachi
Were pill n’ime awa iri atọ ma emechaa, m nọ n’ụbọchị na-eme nri, enwere m ike ịtụrụ ime?
Ndewo, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta, ọ mepụtara ugboro abụọ n'ime m, m were prostinor mana m were naanị 1 na m nọkwa na-ahụ nsọ, enwere m ike ịtụrụ ime
Ndewo, enwere m mmekọahụ na-enweghị nchebe na Satọdee 28th na enyi m nwoke gbasaa n'èzí, m ka na-a theụ ọgwụ ahụ otu awa mgbe e mesịrị, ụbọchị 3 agafeela ma agbapụghị m ọbara (nke a bụ oge mbụ m na-a theụ ọgwụ ahụ ma ha asị na m nwere igba obara) mana ruo ugbu a enweghi obara m amaghi ma m kwesiri igba obara ma o bughi. Nyere m aka
Ndewo na m nwere mmekọrịta na-enweghị nchebe mana enyi m nwoke gbaghaara n'èzí m, m ka na-ewere mkpụrụ ọgwụ ahụ mere na Satọdee ma ọ bụ Tuesday ma anaghị m agba ọbara ihe ọ bụla, enwere m ahụ mgbu mana naanị nke ahụ (ọ bụ oge mbụ na m were ogwu na ndi enyi m Ha si m aghaghi igba obara ma o rue ugbu a anaghi agba obara)
Ndewo, etinye m mgbanaka ikpu izu abụọ gara aga, enwekwara m mmekọahụ, ebe m ejighị n'aka ma mgbanaka ahụ ọ na-arụrụ m ọrụ mgbe izu abụọ gachara, m weere ụtụtụ mgbe pill gasịrị ... Mgbanaka ahụ ọ na-efunahụ ya?
Ndewo m chọrọ ịjụ ajụjụ, enwere m oge nke ụbọchị 4 na ụbọchị nke anọ m na-a tookụ ọgwụ nke ụbọchị mgbe ọ bịabeghị. Sara, ogologo oge ole ka ọ ga-abịa?
Daalụ na ị nwere esemokwu echi
Zaghachi na hillary jazmin condor yataco
Ndewo, mụ na onye òtù ọlụlụ m nwere mmekọrịta, m nọ na ụbọchị m na-eme nri ma n'ụtụtụ echi ya, m theụrụ ọgwụ ahụ, m nwere ike ịdị ime
Ndewo kedu ka ihe si mee! Amụtala m ihe banyere pill a ma na m ejikwala ya tupu! afọ a n'ọnwa June m tookụrụ ọgwụ ahụ .. ma ugbu a na Nọvemba 20, 2016 m ga-ewerekwa ọzọ ... ajụjụ m bụ na ị chere na ahụ ga-emetụta nke ukwuu? n’ekweghi ka ọnwa isii gafee .. A na-atụ aro ya ugboro abụọ n’afọ mana oge a ọ ga-amasị m ịmata ma ọ ga-emetụta m ọtụtụ? ...
Firstbọchị mbụ m weere 1.5 glanique na n'ime awa 24 nke iwere m nwee mmekọahụ. Ọ ga-echebe m maka 72h00 na-egosi
Nnọọ! Ajuju m bu: ogwu o nwere otu ihe ahu o metara nwanyi muru umu? N’afọ, akpa nwa adịkwaghị otu mgbe ị mụrụ nwa, nri?
Daalụ biko biko zaghachi.
Enwere m mmekọahụ ma ọ bụrụ na nchedo enwere m ọgwụ mgbochi mberede n'otu ụbọchị ahụ ma n'ụbọchị nke anọ m ga-anọ n'okpuru ọbara ọbara ọbara ọbara ọ ga-abụ oge m
Zaghachi raybee jaramillo
A Iụrụ m ọgwụ mgbochi mberede otu ụbọchị ahụ nọ n'okpuru ọbara ọbara na agba aja aja n'ụbọchị nke anọ, gịnị ka ọ ga-abụ?
Ndewo, gbaghara m, enwere m mmekọrịta na Eprel 14 na 10pm ma ewere m mbadamba ụtụtụ n'echi ya na 8pm mana were m abụọ, ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ndewo, m na-echegbu onwe m n’ihi na enweghị m ike ịtụrụ ime, nara mkpụrụ ọgwụ ahụ n’echi ya na ọnwa Machị na Machị, ọnwa abụọ n’usoro n’afọ a.Gini ka m ga - eme?
Ndewo, biko, m ga-achọ ka ị nyere m aka, enwere m nnukwu obi abụọ na n'otu oge m na-echegbu onwe m, na Machị 31 mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta na-enweghị nchebe yana dịka akpachara m anya, m theụrụ ọgwụ ahụ n'echi ya n'April 01 na ihe dika iri na ise Ubochi m were ya, oge nke m biara mgbe ahu anyi nwere mmekorita ozo na May 01 ma mu were ogwu ahu n’echi ya na May 02 ma rue ugbua enweghi akara nke onwa m na echegbu onwe m ma m ime
Blue urukurubụba dijo
Achọrọ m enyemaka gị iji mara ma m nwere ike ị pụ ọgwụ ọzọ n'echi ya, ebe ọ bụ na 8 ụbọchị gara aga m were otu, taa condom na-anọgide n'ime, gịnị ka m ga-eme ??????
Zaghachi na Blue Butterfly
Ọ ga-amasị m ịmata mmetụta ọ na-eweta mgbe mmadụ na-ewere mkpụrụ ọgwụ ahụ n'echi ya mgbe otu ọnwa gachara?
Holw, otu ọnwa gara aga, aara m ụtụtụ mgbe mkpụrụ ọgwụ gachara ụbọchị abụọ n'usoro ma achọrọ m ịma gbasara ndị mmadụ nwere otu ihe ahụ ma ọ bụ ihe mere ha. M na-ahapụrụ ha email m ka ha nwee ike idegara m akwụkwọ solange.ivonne@hotmail.com
Jenesis G dijo
N'ehihie, mụ na enyi m nwoke nwere mmekọrịta na 7th nke ọnwa gara aga wee daa, m na-a theụ ọgwụ ahụ n'echi ya wee nweta oge m n'otu ọnwa ahụ 19 mana ọnwa a enwere m mmekọrịta na nchedo ma ọ nweghị agbaji. o burukwa ubochi ma abatabeghi m, o ga-enwe ihe mkpuru ogwu ???
Zaghachi Jenesis G
Ndewo… M tookụrụ ọgwụ ahụ n'ehihie mgbe m nwesịrị mmekọahụ mana anaghị m agbapụ n'ihi na anyị nwere ihe dịka minit 5. Achọrọ m ịma etu ọ ga-esi metụta nsọ m?
Enwere m obi abụọ m nwere mmekọrịta m na onye mmekọ m na Sọnde, Jenụwarị 5 nke afọ a, na ihe dị ka elekere abụọ nke ụtụtụ. BỌCH J N’ANBỌCHAN 2 N’ ILỌ NCHE M AH IR I M N’OTU N’OGE B IS ỌBOUR MY M N’AGBANY I M NA-AZAGH I M Achọrọghị M Ime Ime.
Midi sket na uwe dị ebe a ịnọ